Atụmatụ vidiyo: Ebumnuche 5 Nwere Otu
Tuesday, July 7, 2020 Satọde, Febụwarị 27, 2021 Douglas Karr
N’ọnwa a, ana m ewepụta oge ka m sachaa m Youtube ọwa yana ị gbalịsie ike ịmịkwuo vidiyo iji soro isiokwu m. Obi abụọ adịghị ya na ike vidiyo - ma nke dị ndụ ma nke edere - na atụmanya na ndị ahịa.
Marketingdị Mgbasa vidiyo
Oriri vidiyo arịgogogokwa n'iji ekwentị eme ihe n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Unlimited bandwidth na elu-edu ngwaọrụ mere ikiri video ụtọ na obere ihuenyo… video mgbasa ozi, yana azụmahịa-metụtara videos, na-na-ele karịa mgbe ọ bụla.
Nke a bụ ọmarịcha nkọwa video na anyị bipụtara afọ gara aga nke na-ekwu maka uru nke vidiyo:
Nke a bụ ihe 5 mere e kwesịrị iji tinye vidiyo na usoro ịre ahịa na azụmaahịa gị n'ịntanetị:
Ihe ngosi - nyocha na ikerita na-aga n'ihu ịchụpụ atụmatụ ọdịnaya vidiyo. Vidiyo pụtara ugbu a 70% nke ndepụta 100 kacha elu na nsonaazụ ọchụchọ. Youtube na-aga n'ihu ịbụ saịtị # 2 kachasị achọta na United States… ajụjụ bụ ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nọ na nsonaazụ ọchụchọ vidiyo ma ọ bụ vidiyo ndị na-asọmpi gị ebe ahụ?
Inye ozi n'uzo di iche - vidiyo na-enye ohere mmadụ na ikike ịkọwapụta okwu ndị dị mgbagwoju anya n'ụzọ dị mfe. Ma ọ bụ ihe nkọwa video dị ka nke dị n'elu ma ọ bụ a omiiko ahịa testimonial… videos bụ ihe ịtụnanya na-ajụ ụgbọala n'ezie njikọ aka.
Mee ka mgbanwe ndị ahịa na-agbanwe - Vidio dị na peeji nke ngwaahịa na ibe peeji nke na-eme ka ọnụọgụ ntụgharị. N'ezie, dị ka otu nnyocha, n'iji vidiyo na ibe ọdịda nwere ike ime ka 86% gbanwee ntụgharị. Amazon, Dell, na ndị ọzọ na-ere ahịa n'ịntanetị nwere ọnụ ọgụgụ na vidiyo e tinyere na ya nwere ike ime ka nsogbu nke onye na-azụ ihe ruru 35% na ecommerce.
Belata ịgbahapụ ma nwekwuo oge-obibi - ebe ndị mmadụ dị njikere maka 28% nke okwu na ibe tupu ha apụ, vidiyo nwere ike itinye mmadụ aka ogologo.
Ntinye aka ika - Idebe ọdịnaya dị mkpa, na-atọ ụtọ, ma ọ bụ na-atọ ụtọ n’ebe ahụ maka ndị mmadụ ịchọpụta nwere ike inye aka iru ndị mmadụ ọhụụ ma ọ bụ gbanwee echiche banyere ụdị gị. Vidiyo na-enye gị ohere iji anya nke uche na nke a na-ejikọ mmetụta uche na ndị na-ege ntị.
Ịmepụta irè vidio ire ere adịghị mfe dịka ọ na-ada, n'agbanyeghị. Ọ bụ ezie na ngwaike na nghazi ngwanrọ adịla mfe iji, asọmpi maka echiche dị oke egwu. Youtube na saịtị vidiyo ndị ọzọ na-enye ọtụtụ ihe nkiri nke nwere ike ịnye gị nghọta ntakịrị banyere onye na-ele vidio gị yana etu ha si eme… jiri ha!
Gbalia ige nti nke anyi Podcast na nso nso a na Owen nke Video Marketing School maka ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ!
Tags: ihe mere videoihe mere maka ahia vidiyoahịa vidiyousoro mgbasa ozi vidiyoyoutubeYouTube vidiyo